Fandaharan’ny TV Katalana Momba Ny Fahaleovantenan’i Katalonia Hiala Amin’i Espaina Miteraka Adihevitra Be · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Novambra 2012 22:22 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, 日本語, Català
Ilay fandaharana Katalàna fampahalalam-baovao “30 minuts” (30 minitra) [ca] antsoina hoe “Independence, step by step” (Fahaleovantena, tsikelikely), izay naely isan-kerinandro tany amin'ny fantson'ny fahitalavi-panjakana TV3 [ca] any amin'ny faritany hatramin'ny 1984, nandefa fizaràna iray mikasika ny toerana misy ny jeopolitikan'i Katalonia ankehitriny. Mipoitra anaty fotoan-tsarotra io fizaràna io, herinandro monja talohan'ny nanombohan'ny fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianam-paritra izay efa akaiky (hatao ny 25 Novambra 2012), izay raisina ho fitsapan-kevitra mikasika ny fahaleovantenan'i Katalonia avy any Espaina.
Afaka jerena ao amin'ny vohikalan'ny TV3 [ca] io fizaràna manontolo io.
Nanararaotra izany fotoana izany hitsikerana ny lahatsoratr'ilay fahitalavi-panjakana Katalana ireo antoko mpanohitra miray ao Katalonia, miampanga ny Filoha Artur Mas ho mampiasa izany hanapariahana ny fampielezan-kevitra mampisara-bazana mba hanohanana ny mety ahafahan'ny antokony (CiU [ca]) hihazona ny fifehezana ny parlemanta.
Na izany aza nahazo isa ambony dia ambony ny “Independence, step by step” amin'ny maha-fizarana be mpijery indrindra azy tamin'ireo andiany efatra farany . Mpijery miisa 750,000 (22.3%-n'ny mpijery fahitalavitra ao Katalona) no nijery io fizarana io, araka ny fanisàna [ca] nataon'i Kantar Media.
Nalaky lasa lohahevitra amin'ny resaka mafana ao anaty aterineto io fandaharana io, satria dia nanomboka niparitaka tao anaty Twitter ny tenifototra #30minuts [ca] nandritra ny fandefasana azy tamin'ny Alahady ary nitohy izany hatramin'ny Alatsinainy maraina. Toa mifandraika amin'ny fahasarotan'io politikam-paritra io ireo fihetseham-po eran-tany mikasika ilay fandaharana, manamafy ny fandinihana fa tsy mora tokoa ny resaka manodidina ny maha-firenena iray an'i Katalona.
Ireo izay nanindrahindra io fizaràna io dia nitsikera izay heverin'izy ireo ho fahamendrehan'ny asa fanaovan-gazety, nomarihan'ny fanolorana hevitra samihafa sy fanoherana ny fomba fijerin'ireo manam-pahaizana mikasika ny fahaleovan-tenan'i Katalona avy any Espaina. Miquel Roca [ca], Katalana mpanao politika nasionalista sady iray amin'ireo loha nanangana ny lalàm-panorenana Espaniola, tahaka an'i Alberto Ruiz-Gallardón, minisitry ny Fitsarana ao Espaina, dia isan'ireo olona nohadihadiana tanatin'io fandaharana io.
@saravaldesB Rehefa ny tatitra no mampihaona ireo hevitra mifandanja, mifanohitra, dia fanaovan-gazety tsara izy izay. Fisarihana olona fotsiny ny ambin'izay. #30minuts mindanandrina @ #elgrandebate (#thegreatdebate)
@JoanJosepPastor Mampamirapiratra ny @30minuts ny “Independence, step by step” izay manazava ny dingana sy ireo fomba fijery samihafa http://bit.ly/R6irhB #30minuts
‏@nasticnastic Ho an'ny #30minuts omaly ny voninahitra rehetra. Enga anie hanaraka ny fitantanany ireo tambajotra hafa.
Amin'ny lafiny hafa, maro ireo mpampiasa aterineto tsy manam-panantenana no naneho ny ahiahiny fa raha variana mitatitra ireo politika fanasaraham-bazana hita any amin'ny faritra ny fahitalavi-panjakana, tsy misy miraharaha kosa ireo tranganà kolikoly miseho anatin'ny politikan'i Katalona — tahaka ny raharaha Cafè amb llet [ca], izay nandoavan'ireo mpanao gazety roa onitra 10.000 euro taorian'ny famoahan'izy ireo fifampiraharahàna hafahafa nisy teo amin'ireo lehiben'ny fahasalamana.
@TeresaSoler “@OriolCanosa: Mety ho afaka atao fizaràna iray ao anatin'ny #30minuts ihany koa ny tantara eo amin'ny @_cafeambllet sy ny rafitra ara-pahasalamana Katalana, sa tsy izany?” Na #60minuts mihitsy aza (60minitra) #tela
@fletandelnorte Te hahita ny fizaràn'ny #30minuts izay na ny rain'ny lalàm-panorenana aza dia hita miresaka momba ny kolitoly mikasika ny CiU: ny Millet, ny ITV, ireo raharahan'ny Crespo, na ny rafitra ara-pahasalamana…
@pauaragay maharavo fa i Miquel Roca, tamin'ny alàlan'ny fandalinany tao amin'ny LV ho an'ny fahitalavitra yahaka ny #30minuts omaly, dia niresaka mahitsy sy mazava.
Misy ihany koa ny famoahan-kevitra manan-danja mifono kiana, mitsikera izay raisina ho fitaterana mitanila sy fanapempoana.
@Gonzografia Azo ihomehezana ny fanomezan-danja ny #30minuts omaly, ny firesahana mikasika ny hetahetan'ny vahoaka, ohatra ny dia hoe mitady fahaleovantena avokoa ny vahoaka Katalana REHETRA.
@CristianFerrerG Diso fanantenana tamin'ilay #30minuts omaly: mitanila, manapempo ary mpomba ny fitondrana. Tokony nanao fitaterana tsara kokoa izy ireo nefa dia nanao fampielezan-kevitra ho an'ny @CiU fotsiny ihany izy ireo.
@ullerol Vao nahita ny #30minuts omaly mikasika ny fahaleovantenan'i Katalonia aho ary hitako fa fombàna ny fitondrana tanteraka izany, fandàvana ny handinika ireo rafitra tena fototra.
Naverin'ireo mpîtoraka bilaogy nodinihana be ihany koa ilay fandaharana. Ao amin'ny Planeta imaginari [ca], ny mpanao gazety Gemma Busquets, izay mifantoka manokana amin'ny fahitalavitra, dia nanana fisainana tsara mikasika ny singa hita tanatin'io fizarana io.
Ilay lohatenin'ny tatitra faran'ny “30 Minuts” dia mampiseho tsara ny ho hitan'ireo mpijery: “Fahaleovantena, tsikelikely.” Raitra raha ny fikarakarana azy, isan'izany ireo fanadihadiana iarahana amin'ireo manam-pahaizana amin'ny lalàm-panorenana sy ara-toekarena manerana ny komitim-pitantanana, ireo lahateny voarakitra nataon'ireo mpanao politika, ny feo ofisialin'ny governemanta Espaniola, ny Minisitry ny Fitsarana Gallardón, ny fametrahana ho anaty vanim-potoana iraisam-pirenena miohatra amin'ny toerana misy an'i Katalona miaraka amin'ny an'i Québec, Kosovo ary Scotland… Ireo tohankevitra mitombina sy ny fanaovan-gazety tsara mikasika ny teny tsara lahatry ny politika sy ny mpikatroka mafàna fo — Adihevitra politika mafonja izay toa mialoha ny dingam-panovàna iainan'i Katalona.